Ụlọ ọrụ - AOOD Technology Limited
Anyị bụ ndị nrụpụta na ndị na-ebubata ngwaahịa dabere na teknụzụ na ihe ọhụrụ dabere na teknụzụ.
E hiwere AOOD TECHNOLOGY LIMITED na 2000 iji chepụta ma rụpụta mgbaaka mgbapụ. N'adịghị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta na nhazi ndị ọzọ, AOOD bụ teknụzụ na-emepụta ihe na onye nrụpụta mgbanaka mgbanaka mgbanaka, anyị na-elekwasị anya mgbe niile na R&D nke ngwanrọ ntụgharị ihu igwe 360 ​​° dị elu maka ngwa ọrụ, ahụike, nchekwa na ngwa mmiri.
Ụlọ ọrụ anyị dị na Shenzhen nke China nke bụ ezigbo R&D na teknụzụ dị elu dị elu na ebe nrụpụta na China. Anyị na-eji usoro ọkọnọ ụlọ ọrụ mepere emepe na ihe ndị na-efu ọnụ e iji nye ndị ahịa mgbanaka mgbanaka mgbanaka eletrik dị elu. Anyị ebutelarị ndị ahịa ihe karịrị 10000 mgbanaka mgbanaka mmịfe na ihe karịrị 70% ahaziri nke emere maka ihe ndị ahịa chọrọ. Ndị injinia anyị, ndị ọrụ mmepụta ihe na ndị na -ahụ maka mgbakọ na -agba mbọ inye mgbanaka mmịfe ntụkwasị obi na -enweghị atụ, nkenke na arụmọrụ.
Mgbakọ mgbanaka mgbanaka
Anyị na -ahụ onwe anyị dị ka onye mgbaaka mgbanaka mgbanaka na -akwado ndị ahịa na okike, mmepe na mmepụta nke ngwaahịa. N'ime afọ ndị gara aga, anyị na -enye ahịrị ọkọlọtọ zuru oke na mgbanaka mmịfe omenala yana mgbakwunye inye ọrụ injinịa kọntaktị mmịfe zuru oke gụnyere imewe, ịme anwansị, imepụta, mgbakọ na nnwale. Ndị mmekọ AOOD na -ekpuchi ngwa dị iche iche zuru ụwa ọnụ gụnyere ụgbọ ala ndị agha, kwụ ọtọ ma ọ bụ mkpanaka antenna, ROV, ụgbọ ọkụ ọkụ, ike ikuku, akpaaka ụlọ ọrụ, robots na -ehicha ụlọ, CCTV, tebụl ntụgharị na ihe ndị ọzọ. AOOD na -anya isi n'inye ndị ahịa ọpụrụiche yana ngwọta ọgbakọ mgbanaka mgbanaka pụrụ iche.
Ụlọ ọrụ anyị na -akwadebe nrụpụta dị elu na akụrụngwa nnwale gụnyere igwe na -akpụ akpụ, lathe, igwe igwe, onye na -anwale mgbanaka mgbanaka, igwe mgbapụta mgbapụta dị elu, oscilloscope, onye na -enyocha ihe mgbagwoju anya, mita torque, sistemụ nnwale siri ike, onye na -eguzogide mkpuchi, dielectric. onye nnwale ike, onye nyocha ihe mgbaàmà na sistemụ nnwale ndụ. Tụkwasị na nke a, anyị nwere ebe nrụpụta CNC dị iche iche na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ọcha iji mepụta ihe pụrụ iche chọrọ ma ọ bụ nkeji mgbanaka mgbanaka agha.
AOOD na -elekwasị anya mgbe niile n'ịmepụta usoro kọntaktị ọhụrụ na -amị amị na izute ngwa ngwa na -arịwanye elu. A na -anabata ajụjụ ọ bụla ahaziri iche.